यातायात बढाउनुहोस् प्रकाशन टाइम्स अनुकूलन गरेर Martech Zone
यातायात बढाउनुहोस् प्रकाशन टाइम्स अनुकूलन गरेर
सोमबार, अक्टोबर 17, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
हामी काम गर्न जारी रूपमा यातायात बढाउनुहोस् गत बर्ष, हामीले एउटा राम्रो क्षेत्र लिएका क्षेत्रहरू मध्ये एक दिन यो थियो कि हामी ब्लग पोष्टहरू प्रकाशित गर्दै थियौं। धेरै व्यक्तिहरूले गरेको गल्ती भनेको केवल उनीहरूको ट्राफिकलाई घण्टा हेरिरहनु र यसलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा प्रयोग गर्नु हो।
समस्या यो छ कि तपाईको मा एक घण्टा को लागी यातायात अवलोकन गर्नुहोस् विश्लेषण तपाईंको टाइम زونमा ट्राफिक मात्र प्रदर्शन गर्दछ, र दर्शकको क्षेत्र हैन। जब हामीले समय क्षेत्र द्वारा हाम्रो ट्राफिक बिच्छेद ग we्यौं, तब हामीले पत्ता लगायौं कि यातायातमा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्पाइक बिहान सबेरै थियो। नतिजाको रूपमा, यदि हामी AM बिहान EST मा प्रकाशन गर्दैछौं भने हामी ढिला छौं। यदि तपाईं साईट वा ब्लग केन्द्रीय, प्रशान्त वा अन्य समय क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने ... तपाईले पोस्ट schedule::9० देखि AM:०० ए.एस. मा हिट गर्न सबैभन्दा पहिले ट्राफिक र सामाजिक साझेदारी गर्न पोस्ट गर्न चाहानुहुन्छ।
त्यस्तै, हामी दिउँसो पोष्ट प्रकाशित गर्न खोज्दै छौं, हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि हामीले त्यसलाई MPM EST पछि गरेनौं, अन्यथा धेरै व्यक्तिले अर्को दिन सम्म पोष्ट देख्नेछैनन्। यदि हामी एक दिनमा posts पोष्ट प्रकाशित गर्ने छौं भने हामी त्यसलाई पहिले प्रकाशित गर्न चाहान्छौं बरु हाम्रो सामग्रीको एक्सपोजर बढाउनको लागि। यदि तपाईं प्यासिफिक समयक्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने, तपाईं :5::3० बिहान PST र २PM PST बीच प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ! त्यसोभए ... तपाइँले पोष्टहरूको तालिका कसरी गर्ने भनेर सिक्नुहुन्छ जबसम्म तपाइँ केही निद्रा गुमाउन चाहनुहुन्न!
सामाजिक साझेदारी तथ्या .्क
अन्तर्राष्ट्रिय पाठ सन्देश तथ्या .्क
अक्टोबर 17, 2011 बिहान 9:33 बजे
एक ग्राहकले भर्खरै सामग्री साझा गर्ने उत्तम समय कहिले थियो भनेर सोध्यो। यो एक महान प्रश्न हो र वास्तव मा लक्षित दर्शकहरु को आधार मा भिन्न हुन सक्छ। यदि तपाइँ कलेजको भीडलाई पूरा गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरू 9-5'ers भन्दा फरक समयमा वेब ब्राउज गर्दैछन्। तपाईको उत्तम शर्त भनेको के राम्रो काम गर्दछ भनेर पत्ता लगाउन केहि परीक्षण गर्नु हो।
अक्टोबर 17, 2011 बिहान 10:29 बजे
निक - तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ। पूर्ण रूपमा दर्शकहरूमा निर्भर गर्दछ! मैले भर्खरै देखेको छु कि केहि व्यक्तिहरूले टाइमजोनहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् र ट्राफिकमा ब्रेकडाउन भएको महसुस गर्दैनन् किनकि हामी जोनबाट जोनमा फैलिन्छौं।
अक्टोबर 17, 2011 बिहान 10:46 बजे
राम्रो विषय र हामीले के देख्छौं संग संगत। तपाईंलाई दैनिक ट्राफिकको समयमा भन्दा अगाडि पोस्ट गर्न राम्रो सेवा दिइन्छ।
अक्टूबर २०, २०१ at २:17० अपराह्न
मैले बिहान राम्रो सगाई भइरहेको देखेको छु। यदि मैले मेरो व्यापार वा मेरा ग्राहकहरूको लागि मेरो ट्वीट वा फेसबुक अपडेटहरू अनुसूचित गर्छु। यो डग साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद।